Madaxweyne Farmajo oo lagu so dhaweeyey Turkiga | Somali National Television - sntv.so
Home VILLA SOMALIA Madaxweyne Farmajo oo lagu so dhaweeyey Turkiga
Madaxweyne Farmajo oo lagu so dhaweeyey Turkiga
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaarey magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga,halkaasi oo ka furmaya shirka madaxda wadamada Islaamka oo looga arrinsanayo qadiyadda Magaalada Barakaysan ee Qudus.
Wafdiga madaxweyn aha Soomaaliya ayaa siweyn loogu soo dhaweeyey magaalada Istambuul ee Dalka Turkiga,waxaana ku soo dhawereyey diblomaasiyiinta Safaaradda Somaaliya ee Turkiga iyo mas’uuliyiinta Dalkaasi Turkiga.
Hoggaamiyaasha wadamada ku jira Ururka Iskaashiga Islaamka oo Soomaaliya ay kujirto ayaa lafilayaa in ay shirkooda ka soo saaraan go’aano deg deg ah oo ku aadan arrinta Qudus.
Waxaa shirkan deg dega ah ee arrinta Qudus 6dii bishaan ku dhawaaqay Madaxweynaha Turkiga Rajab Dayib Ordogan si Madaxda Islaamka ee ku mideysan OIC ay isula gorfeeyaan go’aanka Madaxweyne Trump ee magaalada Qudus uu ugu aqoonsaday in ay caasimad u tahay Israaiil,iyo jawaabta ay kabixintoonto Dunida Islaamka.
Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada C/nuur Maxmed Axmed ayaa sheegay in shirku uu bilaabanayo maalinta Arbacada ah iyadoona la filayo in ay ka soo qeyb-galaan madax iyo wufuud ka socota 57da dowladood ee xubnaha ka ah Ururka Iskaashiga Islaamka.
“Soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka dhidibada u taagay Ururka Iskaashiga Islaamka. Sidaas daraadeed waxaa lagama maarmaan ah in aan kaalinteenna ka qaadano go’aan ka gaarista arrimaha nagu xeeran ama ku soo kordha dalalkan aan bahwadaagta nahay.”Ayuu yiri C/nuur.
Wixii ka dambeeyey markii madaxweyne Donald Trump uu ku dhawaaqay in Qudus ay tahay Caasimadda Israel waxaa marqura caro xoogan muujiyay dhamaan shucuubta muslimiinta ah ee caalamka ku nool,waxaa bilowday bannaanbaxyo looga soo horjeedo go’aanka qaldan ee uu qaatay madaxweyne Trmp.
Previous articleRuushka oo ciidamadiisa kala baxaya Syria.
Next articleKenya oo dardar gelinaysa weerarrada ka dhanka ah Al-Shabaab